Gooticha WBOn Wal Baraa Dandeessan gragaaraa! |
Gooticha WBOn Wal Baraa Dandeessan gragaaraa!
WBOn WAL BARAA
Goota Gootaa Jajjabee, Waraana Bilisummaa Oromoo[WBO] ture. Maqaan dhaloota isaa Maammad Aammee, Kaaba Oromiyaa Walloo ti dhalate. Umurii isaa xiqqoo irraa kaase qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti dabarse. Dhaabataa fi qabatamaan waggaa digdamaa ol WBO keessatti dirqama isaa bahaa ture. Taakiyaa irraa kaasee Abbaa Muraasaa, … Hanga ajejaa cifiraatti hogganee dirqama isaa haalan bahaa goota dabarse Sabboonaa quuqamaa QBO ti. Jajjabeen kuni Oromoodhan caalaa diina biratti beekama. Lafa Maammad jira jedhanii shakkanitti diina jiraatti kan Rirmeen nyaatte danuudha. Gootni kuni Yeroo ammaa akka tasaa harka diinaa bu’ee mana hidhaa Waayyannee keessatti argama.
Adoolessa 2016 Zoonii kibbaatii dirqama fudhateen bobba’ee mooraa diinaa guddichaa Magaalaa Mooyyalee irratti haleellaa baneen, diina hedduu ajjeesee Meeshaa gurguddaa fi raasasa guutummaatti kan too’ate keessa beektonni ragaa bahaaf.Mooraa diinaa guutumaan guututti too’atee erga of duuba deebi’ee haxxee diinan hidhame gidduu bu’ee Harka Mirgaasaa raasasaan dhawamee qabame. Gootni waggaa 20 ol diina irratti tarkaanfii maayii fudhatee seenaa waara’aa QBO keessatti galmeessisaa ture yeroo jalqabaaf osoon hin milkaa’in hafeera.
Qawwee moora qabsoo Oromoo keessatti kan kuusuun beekamu ta’uu Qabsoon Oromoo ni hima. Gootni kuni waan nama ajaa’ibu Ummata Oromoo Boorana biratti baay’ee beekamaa fi jaalatamaadha. Waa’ee qabsa’aa mirga Oromoo kanaa waan baay’ee sitti himu. Diinni ajjeesee qawwee irra hiike galmeen himee hin fixu. Oromoo tokko diinni ajjeesee dhagahee, diinarraa shanii fi isaa ol Oslo hin ajjeesin yoo oole bule ni dhukkubsata jedhu. Mee waan inni erga harka diina bu’ee gaafatamee, akka jedhee deebiseen siniif qooda. “Ma’aakalawwitti yeroo qoratan, Waggaa meeqa qabsoo keessa turte? Ani gaafa Wayyaneen aangotti dhufee irraan qabsoo eegale. Hanga wayyaneen kufuttin qabsa’a. Mee qabsoo erga seentee nama meeqa ajjeefte? Ani diina malee nama tokkollee ajjeesee hin beeku.
Via Oromticha Kush Guddicha. Via Qe’ee Abbichuu Salaalee
Yaa’ee hin dhumu kan Irreecha barana
SQ: Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Onkoloolessa 5, 2017